गरिबको झुपडीमाथि ‘हाइटेन्सन’को तार ! - Mahendranagar Post
Home अन्य गाउँघर गरिबको झुपडीमाथि ‘हाइटेन्सन’को तार !
गरिबको झुपडीमाथि ‘हाइटेन्सन’को तार !
झापा-गौरादह- २ दहलुका प्रीति हस्दाको घरमा फुसको छानो छ । घर पनि फुसले नै बेरा गरेका छन् । उनकै घरमाथि छ, बिजुलीको ‘हाइटेन्सन’ लाइनको तार ।
सुकुम्बासी हस्दालाई ठूलो हावा आउँदा पनि तार चुँडिएर अप्रिय घटना घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । तर, चार दशकदेखि झाडी फाँडेर बसेका उनीहरूको यो बस्ती अर्कैले आफ्नो नाममा गरेको छ ।
पुस्तौँ सुकुम्बासी जीवन बिताउनुको पीडा त छँदै छ उनलाई । त्यहीँमाथि राज्यले झनै पीडा थपिदिएको छ । विगतमा बिजुलीको तार सडकतिर थियो । पछिल्लो समय उनीहरूको घरलाई नै खतरा हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तार घरमाथि सारेको प्रीति बताउँछन् ।
‘पहिला त बाटोको छेउमा बिजुलीको तार थियो । अहिले त घरैमाथि छ’, उनी भन्छन्, ‘ठूलो हावा आयो भने पनि तार चुँडिएला भन्ने डर हुन्छ । तार चुँडियो भने त हामी बाच्दैनौँ होला । खरानी हुन्छौँ होला ।’
दहलुमा १८ घर सुकुम्बासी सन्थाल छन् । त्यहाँ अधिकांश घर फुसको छानो भएका छन् । फुसको छानो भएका घरमाथि बिजुलीको तार नराख्न पटक पटक जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।
‘हामीलाई यो तारले जलाउँछ भनेर नेताजीहरूलाई बारम्बार भन्यौँ तर उहाँहरूले हाम्रो कुरा सुनिदिनुभएन’, सानुमुन्सी हस्दा भन्छन्, ‘यो बस्तीमा त सरकारले कहिल्यै हेर्दैन । गरिबले त सधैँ यसरी नै त बाँच्नुपर्ने रहेछ !’
दहलुका सन्थाल सुकुम्बासीको घरमाथि मात्र बिजुलीको तार भएको उनीहरू बताउँछन् । अन्य ठाउँमा बस्ती जोगाएर तार विस्तार गरेको सानुमन्सीको भनाइ छ । ‘अरूतिर त घरलाई, बस्तीलाई जोगाएर तार लगेको छ’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो बस्तीमा मात्र घरमाथिबाट तार लगेको छ ।’ विगतमा बिजुलीकै तारका कारण पनि एक घरमा आगलागी भएको उनी बताउँछन् ।
गौरादहका नगर प्रमुख रोहितकुमार साहले फुसको छानो भएका घरमाथि ‘फोर फेज’ बिजुलीको तार हुँदा जोखिम बढेको बताए । उनले उक्त काम जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगावै भएको दाबी गरे ।
‘बिजुलीको तार कहाँबाट लैजाने भन्ने जिम्मा प्राधिकरणको हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यो गाउँमा हाइटेन्सन लाइनको तार घरमाथि हुँदा समस्या भएको छ । जोखिम छ । तर, यो काम हामी निर्वाचित भएर आउनु अगावै भएको हो ।’
जोखिमा रहेको बस्तीमाथिको तार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नगर प्रमुख साह बताउँछन् । ‘म गएर के छ अवस्था हेर्छु । विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर त्यो समस्याको समाधान पनि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु’, प्रमुख साहले भने।न्युज कारखाना
Previous articleकांग्रेस बैतडीमा संस्थापन खेमाको प्यानल घोषणा
Next articleएमाले स्थायी कमिटी बैठक : सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट